महिलाले किन सम्भोग गर्छन् ? यी हुन् केही आश्चर्यजनक कारणहरु - Gokarna News
एजेन्सी– महिलाले पुरुषसँग सम्भोग किन गर्छन् ? आफ्नो वैवाहिक जिवनलाई शान्त पार्न वा टिकाउन या विनाकारणको टाउकोदुखाइ बाट मुक्ति पाउन । महिलाहरुका लागि सम्भोगको कारणमा रोमान्स तथा आनन्द र इच्छा निकै पछाडि पर्दछन् । धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ । तर महिलाहरुमा भएको अध्ययनका आधारमा तयार भएको एक पुस्तकले यस्तै भन्छ ।
८४ प्रतिशत महिलाले आफ्नो वैवाहिक जिवन तथा घर संसारलाई टिकाउन र शान्ति कायम राख्नका लागि नै सम्भोग गर्ने गरेको बताएका छन् । केही महिलाका सम्भोग गर्ने कारण निकै विचित्र थिए । कतिले पुरुषप्रति दया जागेर सम्भोग गरेको बताए भने कतिले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि सम्भोगको उपयोग गरेको बताए( पैसा वा बहुमुल्य वस्तु हासिल गर्न ।